चर्चित नायक आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्मा ग'हिरो प्रेममा छन् ? (भिडियो हेर्नुस्) - Nawalpur Dainik
चर्चित नायक आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्मा ग’हिरो प्रेममा छन् ? (भिडियो हेर्नुस्)
April 13, 2021 April 13, 2021 by Nawalpur Dainik
नायिका पूजा शर्मा र नायक आकाश श्रेष्ठको जोडीलाई दर्शकले निकै मन पराएका छन् । संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै पूजा र आकाशले दर्शकका कारण दर्शककै लागि आफूहरु एकसाथ रहेको बताएका छन् ।
दर्शकले त तपाइहरुको जोडीलाई धेरै मन पराए अनि वास्तविक जीवनमै हेर्न चाहेका छ्न नी भन्ने संचारकर्मीको प्रश्नमा पूजाले भनिन्– यो दर्शकको चाहना हो । यसलाई हामीले आत्मसात गरेका छौ । हामी, दर्शकको मायाकै कारण एकसाथ काम गरिरहेका छौ । भोलीको कुरा कसलाई थाहा हुन्छ र ?
नायिका पूजा शर्माले भनिन हामी राम्रो साथी होउ तर आफूहरु बिहेको सोचमा भने आइनसकेको बताइन् । चलचित्र ‘रामकहानी’मा एकसाथ काम गरेपछि पूजा र आकाश नजिक भएका थिए । दर्शक यो जोडी वस्तविक जिवनकै जोडी होस भन्ने चाहन्छन ।
यता दाङको तुलसीपुरमा जन्मिएका नेपाली चलचित्रका नायक आकाश श्रेष्ठ कार्तिक १९ गते आफ्नो जन्मदिन मनाइरहेका थिए । नेपाली चलचित्र ‘म त तिम्रै हुँ’बाट रंगिन दुनियाँमा प्रवेश गरेका आकाशको करिअरको दौड भने चलचित्र ‘रामकहानी’मा काम गरेपछि सुरु भएको थियो । नायिका पूजा शर्मासँग जोडिएपछि आकाशको करिअर परिवर्तन भयो । आज आकाशको हातमा चलचित्र र म्यूजिक भिडियोको कुनै अभाव छैन ।
जन्मदिनको अवसरमा कुरा गर्दै नायक श्रेष्ठ आफूले भनेका थिए अझै करिअरमा धेरै कुरा सिक्न बाँकी छ । उनले फ्यानले दिएको अथाहा प्रेमको बारेमा भने–‘मैले करिअरमा यो उपलब्धी पाउँछु भनेर सोचेको थिइनँ । जुन तरिकाले फ्यानले मलाई माया दिनुभएको छ, कहिलेकाही यो कुराले म आफै आश्चर्यमा पर्छु ।’
नायिका पूजा शर्मासँग सहकार्य भएपछि आफ्नो करिअर बदलिएको आकाशले स्विकार गर्छन् । आकाश भन्छन्–‘हाम्रो टिमअपलाई दर्शकले मन पराउनुभएको हो । सायद, हामीले एक्लै काम गरेको भए यो खालको माया नपाउन पनि सक्थ्यौ । यसैले, यो टिमवर्क हो ।’ उनको प्रतिक्रिया सुन्दापनि उनीहरु नजिक छन् । सायद परिस्थितीले नै भएपनि आकाश र पूजाको जोडी रियलमा नै फ्यानहरु हेर्न चाहान्छन् ।
Prevवैशाख १ वाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई नयाँ निमय, पुरा नगरे विमानस्थलवाटै फर्कनु पर्ला
Nextबैशाख ०१ गते बुधबार, यस्तो छ तपाईंको राशिफल